Iimagazini ezi-3, imibhalo emi-3-iGeofumadas
NgoJuni, 2011 Apple - Mac, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Namhlanje uye wafika Umagazini wePC, ushicilelo lwedijithali lukaJulayi 2011. Ndithatha eli thuba ukukhuthaza umxholo obundonwabisile apha kule nguqulelo ingenakulungiseka yokubuyela ukwenza phantse yonke into ngezikhonkwane zethu.
Ndiphinde ndikhuthaze iingcebiso zomdla ekugqibeleni kwamaphephancwadi amabini kwi-geospatial medium ukuba siyazi.
Eminye iipad, Umagazini wePC:
Uphengululo oluxabisekileyo lweepilisi ezizama ukukhuphisana ne-iPad. Kulunge kakhulu ukuba ucinga ukuthenga ithebhulethi ngaphandle kokuchitha imali eninzi kodwa ungathathi sigqibo sokukhanya nokuba; isifundo siphathwa phantsi koqwalaselo lwezinto ezilungileyo, ezimbi nezimbi.
I-10 ihlola imizekelo eyahlukileyo, igxininisa umgaqo, umonakalo kunye neendlela apho umveliso uphambili:
Asus Eee Pad Umguquli
Umbala weBarnes kunye neNoble Nook
I-RIM BlackBerry Play Book
T-Mobile G-Slate yi-LG
TopoDOT, News Lidar
Eli liphephancwadi elikhethekileyo kumxholo wokubanjwa kwelifu, ukuqhubekeka kunye nokusetyenziswa. Ushicilelo lwangoku luzele ziingcebiso malunga nokubanjwa kwedatha okuzenzekelayo, endikucebisayo ukuba kujongwe; nangona intengiso yeTopoDOT ibambe umdla wam, isixhobo sokulawula idatha yokuskena i-laser esebenza neMicrostation, nokuba ifikelela kwiselfowuni.
Okwangoku, i-Bentley sele inayo ezi ndidi zamakhono akhelwe ngaphakathi, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba sele zikhona izicelo ezinje ngeTopoDOT ephuhliswayo kwiV8i. Umcimbi apho ungenakucutha kuJoe Croser, owayenguMlawuli weBentley yeNtengiso yeHlabathi ngexesha apho inkampani ikwazile ukukhula kakhulu. Okubalulekileyo ngoJoe kukuba waya ePointools, apho waphinda waqalisa umanyano kunye neBentley ukwenza ukuba umsi wePointools udityaniswe namaqela okufaka idatha kunye neqonga leMicrostation, i-AutoCAD kunye neRhino.
Ibali leRwala, umShandi waseMerika
Esi sisikhumbuzo esingalibalekiyo, esisikhumbuza ukuba ubume bengingqi asisihloko sitsha. Yenza izingqinisiso ngokubaluleka kwamaxwebhu abambekayo, umba esingenakuwutyeshela kuba uphawu lwelitye olusetyenziswe njengendawo ephawuleka ngokwejografi lunokuxabisa ngaphezulu kwe-10 MB kwi-hard drive ezandleni zesela elincinci, uhlobo olukhwela iteksi ngohlobo lokuthimba.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Free Book GIS
Post Next I-Georeferencing ifayili ye-CADOkulandelayo »